खनाल–नेपाल पक्षको स्थायी समिति बैठक सुरु, के छन् एजेण्डा ? « Naya Page
खनाल–नेपाल पक्षको स्थायी समिति बैठक सुरु, के छन् एजेण्डा ?
काठमाडौं, २० चैत। नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरू शुक्रबार बैठकमा जुटेका छन् । कलंकीस्थित मेगा पार्टी प्यालेसमा ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक झण्डै डेढ घण्टा ढिलागरी सुरु भएको हो ।
आजको बैठकले खनाल–नेपाल पक्षले संगठन सुदृढीकरणसम्बन्धी एकीकृत दस्तावेज तयार गर्ने छ । बैठकले संगठन सुदृढीकरणसम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना बनाउने बताइएको छ । सो समुहका एक नेताका अनुसार गत चैत ४ र ५ गते सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा पारित कार्यपत्रलाई आवश्यक संशोधन गर्दै दस्तावेजका रुपमा तल्ला कमिटीसम्म वितरण गर्ने योजना छ ।
पहिलो चरणमा वडा तहदेखि प्रदेशसम्म समानान्तर कमिटी बनाइने भएको छ । खनाल–नेपाल समूहले यसअघि नै ‘डकुमेन्ट’ नै तयार पारेर राजनीतिक–वैचारिक अभियान चलाउने निर्णय लिइसकेको छ ।
राप्रपाको एकता महाधिवेशन शुरु, तीन अध्यक्षले गरे उद्घाटन